राष्ट्रपतिको पत्रपछि सेनाको आकस्मिक बैठक | BIVAS
← सरकारद्वारा प्रधानसेनापति बर्खास्त	को हुन् कुलबहादुर ? →	राष्ट्रपतिको पत्रपछि सेनाको आकस्मिक बैठक	04
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवद्वारा जङ्गी अड्डालाइ पठाइएको पत्र
राष्ट्रपति रामवरण यादवको पत्र पाएपछि जंगीअड्डामा राति १० बजे प्रधानसेनापति रुकमांगत कटवालनिकट जनरलहरूको आकस्मिक बैठक बस्यो। वैठकमा राष्ट्रपति यादवबाट आएको निर्णयलाई पालना गर्ने या नगर्ने विषयमा गम्भिर छलफल भएको थियो। आकस्मिक बैठकमा सेनापति कटवालबाहेक बलाधिकृत रथी बलाधिकृत छत्रमान गुरूङ, व्यवस्था तथा युद्धमहानिर्देशक गौरवशम्शेर राणा, कार्यरथी नेपालभुषण चन्द, उपरथी दमन घले र प्राडविभाग प्रमुख सहायक रथी बीएकुमार शर्मा उपस्थित थिए। यसमा अन्य जर्नेलहरूलाई बोलाइएन। आइतबार बिहान १० बजे मन्त्रिपरिषदको बैठकपछि रक्षामन्त्री रामबहादुर थापाले खड्कालाई बोलाएर कायममुकायम प्रधानसेनापतिको पत्र दिएका थिए। त्यसलगत्तै थापाले कटवाललाई अवकाशको पत्र थमाउन खोज्दा उनले ‘त्यो सरकारी पत्र हो, अफिसमै लिन्छु’ भनेर त्यहाँ बुझ्न मानेनन् । त्यसपछि रक्षामन्त्रीको निर्देशनमा कामु रक्षासचिव जोशी र सहसचिव श्रीधरप्रसाद पोखरेल आफैं जंगीअड्डा गइ सैनिक सचिवको कार्यालयमा पत्र बुझाएका थिए।
पत्र बुझेर पनि कटवालले सेनापतिको हैसियतले पीएसओ (प्रिन्सिपल स्टाफ अफिसर) बैठक डाकेका थिए। दिउँसो १ बजे बसेको पीएसओ बैठकमा कटवालको राति बैठकमा बसेका जर्नेलहरू गुरूङ, राणा, चन्द र घलेबाहेक बलाध्यक्ष कुलबहादुर खड्डा, सम्भाररथी तोरणजंगबादुर सिंह, प्रवन्धरथी केशव महत, उपत्यका पृतनापति अनिलजंग थापा, राष्ट्रिय सुरक्षापरिषदका सदस्यसचिव अनन्त थेवे, सैनिक स्वास्थ्य महानिर्देशालाय प्रमुख सुरजशम्शेर राणा थिए।
सामान्यतया विदाको दिनबाहेक हरेक शुक्रबार सेनाको पीएसओ बैठक बस्ने गर्छ, जसमा दुई तारे जर्नेल (उपरथी) भन्दा माथिका सैनिक अधिकृतको उपस्थित हुन्छ। आइतबारको पीएसओ बैठकमा कानुनी कुराको रायसल्लाह लिन प्राड विभाग प्रमुख सहायक रथी बीएकुमार शर्मा, मानवअधिकार विभाग प्रमुख सहायकरथी निरेन्द्र रिजाललाई पनि बोलाइएको थियो।
बैठकमा कटवाल र खड्काले पाएको पत्र पढेर सुनाइयो। त्यसपछि कटवालले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै सबै जर्नेलहरूसँग सहयोगको याचना गरेका थिए। ‘कारबाही व्यक्तिमाथि भएको हो, संस्थालाई होइन । व्यक्तिको कुरामा सिंगो संस्थालाई मुछ्नु हुँदैन भन्ने सल्लाह दियौं’, पीएसओ बैठकमा सहभागी एक उपरथीले भने, ‘अन्याय परेको भए न्यायको ढोका ढक्ढकाउनु बुद्धिसम्मत हुन्छ, तर सेनाको एकतामा खल्बलाउनु हुँदैन।’
कटवाल निकट जर्नेलले भने राष्ट्रपति रामवरण यादवले सरकारलाई तत्काल सेनापति नहटाऊ भन्ने पत्रलाई उदृत गर्दै तत्काल ‘हेर र पर्ख’ को नीति अपनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। पीएसओ बैठकमा मत बाझिएपछि त्यस बैठकमा आएका अन्य जर्नेलहरू बलाधिकृत रथी छत्रमान गुरूङको कार्यकक्षमा गई छलफल गरेका थिए । रथी गुरूङले उपस्थित जर्नेललाई संयमित रहन र उत्तेजनामा नआउन आग्रह गर्दै मध्यमार्गी धारणा राखेका थिए।
त्यसपछि पीएसओ बैठकका सहभागीहरू बलाध्यक्ष खड्काको कार्यकक्षमा गएका थिए। ‘उहाँले रक्षा मन्त्रालयको पत्र देखाउँदै सरकारको आदेश मान्न र आफूलाई सहयोग गर्नुपर्ने विचार राख्नुभयो’, खड्कानिकट एक उपरथीले बताए । खड्कासँग छलफल गरेपछि फेरि तिनै जर्नेलहरू बलाधिकृत गुरूङको कार्यकक्षमा गएका थिए।
‘सेनापतिको विषयमा सत्तारुढ दलहरूबीच अन्यौल भएकोले हामीहरूले सरकारको निर्णय मान्नुपर्छ भन्ने केही छैन। हाम्रो परमाधिपति राष्ट्रपति हुन्, उनले जे भन्छन्, त्यही आदेश मान्छौं। अझै पनि निर्णय हेरफेर हुनसक्ने हाम्रो आशा छ’, कटवालनिकट अर्का उपरथीले भने।
रक्षा मन्त्रालयले दिएको पत्रमा कटवालले आइतबार राति १२ बजेसम्म पदमा बहाल रहनेछन् र सोमबार बिहानदेखि खड्काले पदभार सम्हाल्ने छन्। खड्काले प्रधानसेनापतिको फुली भने पाएका छैनन्। तर उनले प्रधानसेनापतिले पाउने अधिकार सबै प्रयोग गर्न पाउने सैनिक ऐन २०६३ मा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपतिद्वारा प्रधान सेनापति कटवाललाई बहालै रहन पत्र पठाएकोलाई माओवादी नेताहरूले ‘संवैधानिक ‘कू’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । माओवादी नेता तथा मन्त्री बाबुराम भट्टराईले भन्नुभयो – ‘निर्वाचित सरकारविरूद्व यो संवैधानिक कू हो, अब शान्ति प्रक्रिया भंग भयो ।’
राष्ट्रपतिले समानान्तर शक्ति केन्द्रका रूपमा स्थापित हुन चाहेकोविरूद्व आफूहरूले जनतालाई अपील गर्ने जानकारी दिँदै भट्टराईले भन्नुभयो – ‘हामी यसविरूद्व सरकार, सदन र सडक, तीनवटै मोर्चाबाट सशक्त प्रतिरोध गर्छौँ।’ आफूहरू निर्वाचित सरकार भएकाले सत्ता छाड्ने प्रश्नै नआउने पनि भट्टर्राईको जिकीर थियो । ‘कसैले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए त्यसको सदनमा सामना गर्नेछौं ।’
यसैविच एकीकृत नेकपा माओवादीले राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सडक र संसद तताउने र अदालत जाने निर्णय गरेको छ। सोमबार बिहान बसेको सचिवालय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको टोपबहादुर रायमाझीले बताउनुभयो । त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीले देशवासीका नाममा अपराह्न ३ बजे सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।
दिउँसो १ बजे मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दैछ । बैठकमा एमाले र सदभावनाका मन्त्रीले दिएको राजीनामाका बारेमा छलफल हुने बताइएको छ।
← सरकारद्वारा प्रधानसेनापति बर्खास्त	को हुन् कुलबहादुर ? →	जवाफ लेख्नुहोस् जवाफ रद्द गर्नुहोस्	Enter your comment here...